कोरोना भाइरसबारे जानकारी दिने डाक्टरको नि*धन – Fewa Times
प्रकाशित मिति: February 7, 2020 5:59 pm
एजेन्सी – चीनमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको जानकारी दिने डाक्टरको नि*धन भएको छ । मृ*त्यु हुनेमा चीनको बुहानस्थित एक अस्पतालका डा. लि वेनलियाङ रहेका छन् । उनको सोही भाइरसबाट नि*धन भएको जनाइएको छ ।
डा. लिले पहिलो पटक कोरोना भाइरस भ*यानक हुने भन्दै सतर्कता अपनाउन सचेत गराएका थिए । तर उनलाई प्रहरीले अनावश्यक भ्रम फैलाएको भन्दै कार*बाही गरेको थियो । उनले पहिलो पटक ३० डिसेम्बरमा भाइरसबारे सचेत गराएका थिए । तर, भाइरसको जानकारी दिएको पाँच हप्तापछि उनी कार्यरत अस्पतालमा मृ*त्यु भएको हो ।
भाइरसको संक्रमणबारे सचेत गराएका उनी पछि संक्रमितहरुको उपचारमा काम गर्दै आएका थिए । सोही क्रममा उनलाई समेत भाइरस सं*क्रमण भएको थियो ।